2 E mesịa, o ruru otu ụbọchị, ụmụ ezi Chineke bịara guzo n’ihu Jehova, Setan batakwara kpọmkwem n’etiti ha iguzo n’ihu Jehova.+ 2 Jehova wee sị Setan: “Olee ebe i si bịa?” Setan wee zaa Jehova, sị: “E si m n’ịwagharị n’ụwa nakwa n’ijegharị n’ime ya.”+ 3 Jehova wee gaa n’ihu ịsị Setan: “Ì tinyewo obi gị n’ebe ohu m bụ́ Job nọ,+ na e nweghị onye dị ka ya n’ụwa, ọ bụ nwoke na-enweghị ihe a ga-eji taa ya ụta, bụrụkwa onye ezi omume,+ ọ na-atụ egwu Chineke,+ ọ naghịkwa etinye aka n’ihe ọjọọ?+ Ọ ka na-eguzosi ike n’ezi ihe,+ ọ bụ ezie na ị na-akpali+ m imegide ya ka m loda ya n’enweghị ihe o mere.”+ 4 Ma Setan+ zara Jehova, sị: “Akpụkpọ ahụ́ laara akpụkpọ ahụ́, ọ bụkwa ihe ọ bụla mmadụ nwere ka ọ ga-enye n’ọnọdụ mkpụrụ obi ya.+ 5 Iji nwee ihe dị iche, biko, matịa aka gị metụ ọbụna ọkpụkpụ ya na anụ ahụ́ ya, lee ma ọ́ gaghị akọcha gị n’ihu gị.”+ 6 Jehova wee sị Setan: “Lee, ọ nọ gị n’aka! Naanị kpachara anya maka mkpụrụ obi ya!” 7 Setan wee si n’ihu Jehova pụọ+ ma mee ka etuto ọjọọ too Job,+ malite n’ọbụ ụkwụ ya ruo n’opu isi ya. 8 O wee were ibe eju ọ ga-eji na-akọ ọkọ; ọ bụkwa n’ime ntụ ka ọ na-anọdụ ala.+ 9 N’ikpeazụ, nwunye ya sịrị ya: “Ị̀ ka nọ na-eguzosi ike n’ezi ihe?+ Kọchaa Chineke nwụọ!” 10 Ma ọ sịrị ya: “Dị ka otu n’ime ụmụ nwaanyị nzuzu+ si ekwu okwu, otú ahụ ka gị onwe gị na-ekwukwa. Ọ̀ bụ naanị ihe ọma ka anyị ga na-anara n’aka ezi Chineke ma ghara ịnara ihe ọjọọ?”+ N’ihe a niile, Job ejighị egbugbere ọnụ ya mehie.+ 11 Ndị enyi Job atọ wee nụ ọdachi a dum dakwasịrị ya. Onye ọ bụla n’ime ha wee si n’ebe o bi bịa, Elifaz onye Timan+ na Bildad onye si n’agbụrụ Shua+ nakwa Zofa onye Neama.+ Ha wee zukọta n’oge ha kara aka+ ka ha bịa sị ya ndo ma kasie ya obi.+ 12 Mgbe ha nọ n’ebe dị anya lepụ anya, ha amatakwaghị onye ọ bụ. Ha wee bewe ákwá n’olu dara ụda. Onye nke ọ bụla wee dọwaa+ uwe elu ya na-enweghị aka ma kpolie uzuzu elu wụkwasị n’isi ya.+ 13 Ha wee soro ya nọrọ ọdụ+ n’ala nkịtị ruo ụbọchị asaa, ehihie na abalị, ọ dịghịkwa onye tụpụụrụ ya ọnụ, n’ihi na ha hụrụ na ọ nọ n’oké ihe mgbu.+